David Silva oo helay dalabkii ugu horreeyay xilli uu xagaagan si xor ah kaga tagayo kooxda Manchester City – Gool FM
David Silva oo helay dalabkii ugu horreeyay xilli uu xagaagan si xor ah kaga tagayo kooxda Manchester City
(Manchester) 08 Juun 2020. Halyeyga ka ciyaarista khadka dhexe ku gaamuray ee David Silva ayaa xagaagan isaga tagaya kooxda Manchester City oo uu 10-kii sano ee ugu dambeeyay u ciyaarayay, waxaana hadda uu helay yaboohii ugu horreeyay kaddib waayihiisa Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, wararka ayaa sheegaya in dalka Qatar uu ka jiro xiiso badan oo ku qotoma sare u qaadidda darajadoodam ciyaarta kubadda cagta, xilli uu ku soo fool leeyahay Koobka Adduunka ee 2022 oo ay iyagu marti galinayaan.
Dib u dhacaas ayaa ka saacidaya Man City inay sii heystaan Silva si ay guulo uga keenaan tartammada Champions League iyo FA Cup.
Kubbad sameeyahan ayaa ka mid ahaa xiddigihii ugu muhiimsanaa ee soo mara Citizens tan iyo 2010 xilligaas oo ay Valencia kaga soo qaateen 26 milyan oo Gini, waxaana uu kula guuleystay afar horyaal oo Premier League ah, labo FA Cup iyo koobka League Cup oo uu afar jeer la qaaday.
Mohamed Salah oo hoggaaminaya xiddigaha muhiimka ah ee Liverpool, kuwaasoo shaki laga gelinayo dib u bilaabashada horyaalka Premier League